Fomba 4 ny paikadim-pitantanana fampisehoana ataonao - na tsy fahampiana amin'izany - dia fotoana laniana, loharano ary orinasanao | Martech Zone
Talata, Desambra 15, 2015 Alarobia, Desambra 16, 2015 AlexAndra Ontra
Azonao atao ve ny manampy ahy hametraka ity fampisehoana ity? Ny fivoriako dia afaka adiny iray. Tsy hitako ilay slide.
Diso diso izany.
$ #! * Izay ny tokotanin-tsambo diso.
Fantatra ve? Avy eo ianao dia TSY mampiasa paikady fitantanana fampisehoana mahomby. Ary, vokatr'izany, very fotoana, loharanom-bola ary indrindra, orinasa ianao. Ny fitantanana fampisehoana dia miantoka fa ny hafatra marina dia ampitaina amin'ny fotoana tena fitsikerana - rehefa misy mpivarotra miresaka amin'ny mpanjifa. Inona no, na tsia, miova mandritra io fivoriana io izay misy fiatraikany mivantana amin'ny farany ambany. Fandresena na fandresena izany.
Ny fitantanana fampisehoana dia milalao fandresena. Raha atao famaritana, io no fomba ofisialy mamorona, mitahiry, manolotra, mizara, manavao sy manara-maso ireo rakitra rehetra ampiasaina amin'ny fanaovana fampisehoana. Amin'ny fampiharana, ny fitantanana fampisehoana dia miantoka ny fanaraha-maso ny marika sy ny hafatra ho an'ny Marketing, mandritra ny fotoana haingana sy mora kokoa ho an'ny Sales mba hamoronana sy hizarana ny atiny fampisehoana.
Ny paikady fitantanana fampisehoana tsara dia hanampy anao hisoroka ireo hadisoana mahazatra ireo - ny fanaovana ny olon-drehetra ao amin'ny ekipanao, amin'ny asa rehetra, mahomby kokoa ary mahomby amin'ny fanatanterahana ny tanjony.
Eritrereto hoe fantatry ny mpivarotra ny toerana hahitana ny atiny. - Teo atsimo atsinanana izy: mitondra fiara amin'ny sasany -Marketing amin'ny anaran'i fampirimana, amin'ny Sharepoint, na angamba nalefa tamin'ny mailaka faobe, miaraka amina fanambarana lehibe. Nalevina tao anaty tambajotra, tao amin'ny toeram-piasana na tao amin'ny Inbox ilay rakitra, ary tsy nisy nanasongadina ny fikarohana mba hanatonana azy ireo ary hahitana an'io solosaina iray tapitrisa io. Tsy misy na iza na iza manolotra fitaovana ilaina amin'ny famoronana na fanaingoana rakitra vaovao ho an'ny tanjona fivoriana vaovao. Ny fitantanana fampisehoana dia mametraka ny atiny farany indrindra eo imason'ny mpivarotra. Miantoka ny fanarahana ny hafatra izany.
Hevero fa samy manana ny atiny manaraka sy manaraka azy ny tsirairay. - Nolazaina tamin'ny rehetra, angamba tamin'ny mailaka, feedter Chatter, na tamin'ny fihaonam-panjakana, fa misy ny kinova vaovao, tsara kokoa, neken'ny lalàna. Mampalahelo fa zavaboary mahazatra ny olombelona. Ary fahazarana mahazatra ho an'ny olona mpivarotra ny maka ny fisie omaly izay mipetraka eo amin'ny biraony ary mampiasa azy io indray. Izy rahateo mahalala ny atiny izay, ary efa ampy ho an'ny fivoriana farany io. Ny vahaolana fitantanana fampisehoana araka ny tokony ho izy dia ho mora ho an'io mpivarotra io hamorona tokotanin-tsambo ho an'ny fivoriany manaraka, satria mety ho ny fampiasana ny tokotanin-tsambo taloha izay mipetraka eo amin'ny biraony. Mitsitsy fotoana.
Tsy mifandray amin'ny Sales. - Raha samy mikendry tanjona iray ny tsirairay, ny varotra sy ny marketing dia fifehezana samy hafa. Ny olona iray mpivarotra tsara dia miezaka manatratra ny isany, ary mahazo fidiram-bola. Mpivarotra tsara dia manangana fananana marika amin'ny alàlan'ny vokatra / tolotra serivisy sy hafatra ataon'ny orinasa. Ny iray dia maharitra, ny iray kosa lava. Samy manakiana ny fahombiazan'ny orinasa iray izy roa. Mampiasà endrika ara-tsosialy ara-tsosialy, ny vahaolana fitantanana fampisehoana dia hampivondrona ireo lahasa fivarotana sy marketing, mba hahafahan'ny tsirairay mizara fahalalana azy ireo amin'ny fotoana tena izy, ary manitsy mifanaraka amin'izany. Fandresena-fandresena.
Tsy fitandremana ny fampisehoana ho singa iray amin'ny fifangaroan'ny fifandraisana. -
Mandany vola an'arivony tapitrisa dolara ny mpivarotra amin'ny famolavolana ny sary tonga lafatra, amin'ny famolavolana toerana iray, amin'ny famoronana tranokala, bokikely, toerana amin'ny fahitalavitra ary dokam-barotra sy antoka hafa, fa ny fampirantiana ny varotra kosa dia nieritreritra. Tehapohy ny sary famantarana sy mombamomba ilay modely PowerPoint ary mandehana, mandehana, mandeha… mivarotra! Ny lazain'ny olona iray mpivarotra sy ny fomba ilazany izany dia ny mahasamihafa ny fandresena sy ny fahaverezana orinasa. Ny fampisehoana varotra dia ampahany antoka; izy io dia singa iray ao anatin'ny fifangaroan'ny fifandraisana, ary tsy tokony horaisina ho toy ny eritreritra aorian'ny. Mendrika hijerena bebe kokoa avy amin'ny Marketing sy ny Sales.
Ny fitantanana fampisehoana dia miantoka fa ny loharanom-pahalalana tsara indrindra an'ny orinasa dia eo an-tendron'ny rantsan-tanan'ny olona mpivarotra, ary ny olona marketing rehetra dia mahazo tsipika mivantana amin'ny kendreny. Ny momba ny famolavolana ny varotra marina, ary ny fiantohana fa ny olon-dehibe dia afaka mamerina sy manamboatra izany amin'ny fivorian'ny tsirairay, ao anatin'ny minitra vitsy - tsy ora ary tsy dia andro. Amin'ny fampiakarana ny fampisehoana fivarotana sy ny fizotran'ny famoronana ireo fampisehoana ireo ho lasa fifangaroan'ny varotra, ny orinasa iray dia manararaotra ny fampiasam-bola amin'ny marketing ary mampihatra azy mivantana amin'ny farany ambany.
Momba an'i Shufflr
Shufflrr dia rafitra fitantanana rakitra izay azon'ny marketing sy ny varotra ampiasaina hamoronana, hizarana ary hitazomana ny fampisehoana manerana ny fikambanananao.
Tags: Power Pointfampahafantaranafitantanana fampisehoana
AlexAnndra Ontra dia mpiara-manorina ary filohan'ny Shufflrr, vahaolana fitantanana antontan-taratasy ilaina amin'ny fampisehoana mavitrika. Shufflrr monina any New York dia mpisava lalana an'ny Presentation Management. Niorina tamin'ny taona 2014 avy amin'i James sy AlexAnndra Ontra, ekipa mpirahalahy manana traikefa mihoatra ny 30 taona amin'ny famolavolana lozisialy fitantanana fampisehoana, Shufflrr dia manampy ny orinasa sy ny mpampiasa tsirairay hitantana, hizara ary hanavao ny atiny fampisehoana, hitsimbina fotoana sy vola.